Mifare 1k S50 Chip ကဒ်, Mifare IC S50 Chip ကဒ်, MF M1 Card ကို, M1 Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Card ကို, Mifare Card ကို, Mifare 1k S50 Card ကို, Mifare IC S50 Card ကို
Mifare 1k S50 Chip ကဒ်
HF Chip ကဒ် M1 Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Card ကို, MF M1 Card ကို, Mifare 1k S50 Card ကို, Mifare Card ကို, Mifare IC S50 Card ကို
Excellent ကအင်္ဂါရပ်တွေနှင့်တည်ငြိမ်ရေး, အဆိုပါ Mifare IC S50 chip ကို applications များ၏ကျယ်ပြန့ရှိပါတယ်: အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, ဒါကြောင့်အပေါ်တန်ဖိုးကိုသိုလှောင်ထားနှင့်.
chip အမျိုးအစား: NXP Mifare 1k S50
ဆက်သွယ်ရေး protocol ကို: IEC / က ISO 14443 TypeA
ရှုထောင့်: က ISO စံကဒ် 85,6 × 54 × 0,80(+/-0.04)မီလီမီတာ
ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ: PVC, ကို ABS, ပေ, PETG, စက္ကူ, 0.13မီလီမီတာကြေးနီဝါယာကြိုး
ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်: Ultrasonic အော်တိုစက်ရုံလိုင်းများ, အလိုအလျောက်ဂဟေဆော်ခြင်း
Mifare 1k S50 chip ကိုကဒ်, ထို့အပြင် MF M1 ကဒ်သို့မဟုတ် M1 ကဒ်အဖြစ်လူသိများ, ထို့အပြင်မူရင်း S50 ကဒ်အဖြစ်လူသိများ, Mifare 1k S50 encapsulation တွေကိုသေချာ၏ဖန်ဆင်းထားသည်.
Mifare 1k S50 NXP ရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ RFID ချစ်ပ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်. Philips ကကနေမူရင်း Mifare IC S50 chip ကို Is (NXP) သော IEC ညီ / ISO ကို 14443A interface ကို protocol ကို. ၎င်း၏အဆင့်မြင့်ဒေတာ encryption ကိုနှစ်ယောက်-လမ်း password ကိုစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းစနစ်က, နှင့် 16 လုံးဝလွတ်လပ်သောကဏ္ဍများ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ features နဲ့တည်ငြိမ်ရေးကို, အဆိုပါ Mifare IC S50 chip ကို applications များ၏ကျယ်ပြန့ရှိပါတယ်, တစ်ဦးကကတ် Solutions ဖြစ်ပါသည်, ရေမီတာ prepaid, အကူးအပြောင်းကဒ် , အဝေးပြေးသေဆုံးသူ, ကားရပ်ခြံ, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, လူနေအိမ်စီမံခန့်ခွဲမှု, ပန်းခြံများ, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့်အခြားဦးစားပေး RFID ထုတ်ကုန်, ကမ္ဘာကြီးကိုအများဆုံးအသုံးများ Non-အဆက်အသွယ် RF chip ကိုအတွက် Mifare IC S50 chip ကို,
နည်းပညာစုဆောင်းခြင်း၏နှစ်ကြာပြီးနောက်, ယခု NXP Mifare IC S50 chip ကိုအစားထိုးရန်နိုင်သည်ကိုတရုတ်အနေနဲ့ RF chip ကိုလည်းမရှိ, အဆိုပါ FM11RF08 chip ကိုပေးသောဖြစ်ပါသည်. FM11RF08 chip ကိုတူညီတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် parameters တွေကိုနှင့် Mifare IC S50 chip ကိုနှင့်သဟဇာတမသာ, က သာ. ကြီးမြတ်အားသာချက်ရှိပါတယ်, အလွန်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါသည်, တူညီတဲ့ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီပိုမိုကြောင်းအမြတ်အစွန်းသေချာစေရန်မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောထုတ်လုပ်နိုင်သည်.
Mifare 1k S50 chip ကိုအရွယ်အစား RF chip ကိုကဒ်အမျိုးမျိုးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်အဓိကလက်စွပ်သို့လည်းလုပ်နိုင်ပါသည်, လက်ပတ် (လက်ကောက်), Epoxy ကတ်များ, အင်းလေး, အီလက်ထရောနစ် tag ကို, ထိုကဲ့သို့သောတံဆိပ်များအဖြစ် applications များအမျိုးမျိုး.
တဦးတည်းကတ် Solutions, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, ဘတ်စ်ကားထဲမှာသိမ်းထားတဲ့တန်ဖိုးကိုကတ်များ, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသေဆုံးသူ, ကားရပ်ခြံ, အဖွဲ့ဝင်ကဒ်, VIP ကဒ်, လူနေအိမ်တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံစီမံခန့်ခွဲမှု.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် Mifare 1k S50 Chip ကဒ်ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်
prev: NXP Mifare DESFire EV1 D21 Chip ကဒ်, Mifare DESFire EV1 D41, Mifare DESFire EV1 D81, DESFire 2K / DESFire 4K / DESFire 8K Chip
နောက်တစ်ခု: Mifare 4K S70 Chip ကဒ်